चितवन प्रहरीको गेटै अगाडि कुटी-कुटी... :: राजेश घिमिरे :: Setopati
चितवन प्रहरीको गेटै अगाडि कुटी-कुटी हत्या प्रहरीले थाहै नपाएको कि, नपाए झैं गरेको?
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मेवारी पूरै जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्ने हुन्छ। तै पनि आवश्यक स्रोत र जनशक्तिको कमीका कारण सबैतिर तत्कालै पहुँच नपुग्नुलाई स्वभाविकै मान्न सकिन्छ।
तर सयौंको संख्यामा सुरक्षाफौज रहने जिल्ला प्रहरी कार्यालयकै सामुन्ने एक व्यक्तिको निर्घात कुटपिट गरेर हत्या गरिन्छ तर प्रहरीले तीन दिन बितिसक्दा पनि घटनाको सुइँकोसम्म पाउँदैन। यसलाई कत्तिको स्वभाविक मान्ने ?
चितवन जिल्ला अदालतले हत्यामा संलग्न दाबी गरिएका चार जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले कमल गन्धर्व, अम्बरबहादुर थिङ, प्रकाश बिक र सागर ओलीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो ।
असार २३ गते राजकुमारको शव फेला परेपछि भाइ सन्तराज गुरुङले जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा किटानी जाहेरी दिएका थिए।
उनले घटनामा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिन माग गरेका छन्। साथै, मृतकको परिवारलाई राहत पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १७, २०७७, १६:२९:००